> Resource > Transfer > Sida loo AVI ka saar Audio
Ka helay video leh in ka badan hal track audio oo doonaya in ay soo saarto mid ka mid ah oo aan loo baahnayn? Ama aad rabto in lagu soo saaro audio, dhawaaqa, ama music asalka ka filimada guriga, YouTube videos, iyo wax kasta oo kale oo file video? Waa hagaag, waxa aad u baahan tahay waa wax faydi sahlan loo isticmaalo audio. Maqaalkani waxa soo socda soo bandhigi doonaa edbinta ah tallaabo-tallaabo ku saabsan sida loo isticmaalo video awood badan sixiddiisa software- Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) . Sidaa daraadeed, Laydinka soo karaa audio ka files video sida AVI, MP4, FLV, AVI, ECT oo waxaan iyaga ku badbaadin ee kala duwan ee qaabab.
1 dar file AVI ee barnaamijka
Si aan ku bilaabo isticmaalaya Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor), download iyo rakibi barnaamijka. Fur AVI aad dooneyso in aad xaalkaa in this video software tafatirka. Waxaad kartaa jiita iyo hoos u faylka barnaamijka ama guji "Import". Markaas file AVI muuqan doona item warbaahinta u dhow Murayaad Xiisaha Leh.
2 saar audio ka file AVI
Markaas file AVI ee Jiida Jaximo Timeline Video ah si ay u bilaabaan tafatirka. Xaqa guji file iyo dooro "Audio fuji". Audio ayaa si toos ah ka muuqan doontaa Timeline Audio ah. Riix audio ka socdaan aad dooneyso in aad tirtirto oo riix "Delete" button aad keyboard. Sidoo kale, waxaad xaq u-riix karaan ay ula socdaan oo ay doortaan "Delete" amarka.
Talo: Haddii aad rabto in aad ku darto ah file maqal ah video ah, oo kaliya waxa n jiidi--hoos u Timeline Audio ah. Markaas laba jibaar guji si aad u xaalkaa in guddi tafatir ah. Waad beddeli kartaa xawaaraha ciyaareed, mugga, garoonka, iwm sida aad jeceshahay. Waxa kale oo aad ku dhacay karaa "Qor voiceover a" iyo surin in aad makarafoonka si aad ugu qortid cod u gaar ah iyo waxa ay sii kordhineysaa in ay video ka.
Ka dib markii in, riix badhanka la abuuro oo u badbaadin doonaa in qaab ku habboon. Geedi socodka qaadan doontaa waqti qaar ka mid ah waxay ku xiran tahay dhererka file wax soo saarka iyo waxqabadka computer aad. Marka saaridda waa in ka badan, aad u ogaato file galka caga oo ciyaaro adiga oo isticmaaleya isticmaale warbaahinta ciyaaryahanka. Dabcan, sidoo kale si toos ah aad gali kartaa file cusub si YouTube ama gubi in DVD- aad dooratay oo dhan!
Hadda uun raaci tilmaan faahfaahsan kor ku xusan oo si fudud u saarto audio ka AVI ama tirtirto wadada dhawaaqa rabin. Ka sokow ka saareen audio, sidoo kale waxaad isticmaali kartaa Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) in aan kala tagno video , midowdo videos mid , isku shaandheyn video , jar iyo video dalagga , ku dar image si video , samaysaa daah multi video iyo in ka badan. Just download this fiican qalab video tafatir oo ay kobciso noloshaada video.